Wararka - Hordhaca waxqabadka iyo wadaagga kiiska shaashadda bandhigga LED -ka ee suuq -weynaha
Shaqada adeegsiga shaashadda muujinta LED -ka ee xarunta dukaamaysiga “Farshaxanka fiidiyowgu wuxuu muujin karaa midabka runta ah ee muuqaalka fiidiyowga firfircoon; waxay baahin kartaa TV-ga xiran iyo barnaamijyada TV-ga dayax-gacmeedka oo leh daacadnimo sare; soo galitaanno fara badan oo fiidiyaha fiidiyaha iyo isku -soo -saarka soo -saarka: fiidyow isku jira iyo fiidiyaha Y / C (s / C) _ Fiidiyow, YPbPr, VGA (rgbhv), DVI, HDMI, SDI (HDSDI); wuxuu ku ciyaari karaa barnaamijyada fiidiyowga sida VCD, DVD, LD oo leh daacadnimo sare; wuxuu ku dul dhejin karaa qoraalka, animation iyo sawirrada guurto ah shaashadda fiidiyaha; waxay xaqiijin kartaa tafatirka waqtiga-dhabta ah iyo shaqooyinka ciyaarta sida aragti buuxa, isku-dhawaansho, toogasho gaabis ah iyo saamayn gaar ah iyada oo loo marayo qalabka tafatirka. Iftiinka, isbarbar dhigga, buuxinta iyo koroma waxaa lagu hagaajin karaa softiweer, oo leh 256 heerar kala duwan oo hagaajin ah; shaqada qabowga sawirka; saddex qaab oo muuqaal ah VGA + fiidiyaha, fiidiyaha iyo VGA; hawsha magdhowga jagada toosan / toosan; muujinta hawsha wada shaqaynta.
Garaafyada kombiyuutarka iyo shaqada ciyaarista macluumaadka qoraalka ayaa soo bandhigi kara dhammaan noocyada macluumaadka kombiyuutarka, qoraalka, garaafyada, sawirrada iyo laba, animation saddex-cabbir ah, iwm .: leh qaab ciyaar qani ah, soo-bandhigid xog-wareejin, ogeysiisyo, halku-dhigyo, iwm, awoodda kaydinta ballaaran macluumaadka xogta. Shaashadda bandhiggu waxay diyaarin kartaa daaqado badan, kalandarka muujinta iyo saacadda, waxayna geli kartaa hal xariiq oo qulqulaya qoraalka. Waxaa jira noocyo kala duwan oo xarfaha Shiinaha ah iyo xarfaha laga soo xusho. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa Ingiriis, Isbaanish, Faransiis, Jarmal, Giriig, Jabbaan, Laatiin, Ruush iyo luqado kale oo badan oo shisheeye. Nidaamka baahintu wuxuu leeyahay barnaamijyo warbaahinno badan leh, kuwaas oo soo gelin kara oo baahin kara macluumaad kala duwan si dabacsan.
Waxaa jira in ka badan 20 hab oo warbaahin, oo ay ku jiraan rogaal bidix iyo midig, kor iyo hoos u rogid, bidix iyo midig riixid, kor iyo hoos u riixid, riixitaan dadban, fidin, nooca fan, wareejin, xajin, iwm. . Ku qalabeysan shabakad shabakad, waxay ku xirmi kartaa kumbuyuutar waxayna wadaagi kartaa ilaha shabakadda. Waxay leedahay isugeyn soosaaris calaamad maqal oo caadi ah si loo gaaro is-waafajin maqal-muuqaal ah.
Bandhigyada LED-ka ee gudaha ee suuqyada wax laga iibsado ayaa inta badan ah P3 muuqaal midab-buuxa leh, muujinta P4 LED, bandhigga elektiroonigga ah ee P5 LED, P6 midab-buuxa LED shaashadda weyn, iwm.
Tayada iyo qiimaha waa mowduucyo aan waligood laga sooci karin badeecadaha. Macaamiil badan ayaa aad ugu nugul qiimaha heerka bilowga ah ee wax iibsiga, waxayna had iyo jeer jecel yihiin inay isbarbar dhigaan suuqa. Xaqiiqdii, tani micno ma leh. Si la mid ah shaashadda elektaroonigga ah ee shaashadda weyn ee LED, tayo deggan oo raagaya, saamaynta muujinta wanaagsan ayaa ah heerka.